Meesha ugu fiican ee mesh dheemanka taxanaha ah ee daaqadda soo saaraha iyo Warshadda | Dijing
Shaashadaha mesh dheemanka waa nooc ka mid ah shaashadaha lidka-xatooyada. Waxay ka samaysan yihiin silig bir-bir ah oo aad u xoog badan oo lagu farsameeyay suun sax ah oo culus, oo dusha sare ayaa lagu buufiyay matte dhammeystiran, oo leh ka-hortagga kaneecada iyo xatooyada. Dhanka kale, waxay sidoo kale ka kooban tahay waxqabad tayo sare leh sida xoog sare, xoog xoog leh, iyo saamayn iska caabin ah. Waxay leedahay faa'iidooyin badan sida xatooyada ka-hortagga, cayayaan-aan caddayn, qurux iyo ammaan leh, oo ay si qoto dheer u jecel yihiin macaamiisha maanta. Isla mar ahaantaana, sidoo kale waa daaqad shaashad isku laaban, oo la riixi karo oo la jiidi karo gudaha qolka, iyo hawo nadiif ah oo dibedda ah ayaa ah mid aan caqabad lahayn. Marka lagu jiro hawo -qaadista, waxa kale oo laga ilaalin karaa kaneecada, taas oo ah doorasho weyn oo loogu talagalay ilaalinta badbaadada.
Tilmaamaha astaanta alaabta
Shaashadaha isku laabma ee mesh dheemanka ayaa go'doomiya arrimo aan badbaado lahayn waxayna qaataan naqshad isku laaban laabis. Waxay leedahay dhinaca jiidista iyo nooca badhida si aad u doorato. Waa mid sahlan, ku habboon, aadna waxtar u leh. Waa la laalaabi karaa oo waa la xiri karaa sidaad doonto, aagga shaashaduna waa la beddeli karaa sida uu doono. , Fudud oo deeqsi ah, kala soocid xooggan, meel bannaan oo weyn. Daaqadaha shaashadu waa kuwo qeexitaankoodu sarreeyo oo hufan, oo aan lahayn wax caqabad ah, iftiinka gudaha waa dabiici oo hufan, godadka dheemmanka ah waa kuwo fiican oo sax ah, iyo mesh aluminiumku waa iska caabin aad u sarreeya oo iska caabin ah. Qufullada qalabka dhismaha ee aadka u dhisan, dadka deggan lagama furi karo dibedda ka dib marka laga soo xiro gudaha, xoogga ka-hortagga xatooyaduna waa heerka koowaad.
Faa'iidooyinka astaanta alaabta
Shaashadaha isku laabma mesh King Kong waa kuwo aad u cusub oo waafaqsan naqshadda aadanaha. Qalabyadeeda qalabka ayaa si xirfadeysan loo soo saaray loona naqshadeeyay, iyo 304 birta aan lahayn ee qafiifka ah ayaa loo adeegsadaa sida sheyga ugu weyn ee sameynta isbarbar dhigga. Qalabka daaqadda shaashadda si madaxbannaan ayaa loo soo saaray oo loo soo saaray, oo loo qaybiyey si mideysan, waxayna leeyihiin silsilad warshadeed oo adag oo astaan ​​u gaar ah. Si fiican loo naqshadeeyay iyada oo loo marayo farsamoyaqaannada, waxay u adkaysanaysaa cadaadiska sare mana leexdo, oo leh tayo aad u fiican iyo adayg. Marka la shido furaha, xarunta cufnaanta qofka ma dhaqaaqdo, qalliinku waa mid sahlan oo badbaado leh, qalliinnuna waa badbaadin shaqo iyo walwal la'aan.
Hore: Taxane Albaabka Swing Bridge Swing
Xiga: Taxane daaqad ah oo laba gees leh